Rooney oo ka hadlay go’aanka ay Manchester United ka qaadatay Jose Mourinho – Gool FM
(Manchester) 23 Dis 2018. Halyayga kooxda Manchester United Wayne Rooney ayaa xaqiijiyay in maamulka kooxda ay ku saxnaayeen go’aankii ay shaqada kaga ceyriyeen Jose Mourinho, sababa la xiriira inaysan wanaagsaneen xaalada jawiga qolka labiska Red Devils.
Wayne Rooney ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in uu ogaaday in saaxiibadiis hore ee kooxda Manchester United aysan xiriir wanaagsan la lahayn Mourinho xiliyadii dambe, wuxuuna tilmaamay inay muhiim ahayd in isbadal weyn la sameeyo.
“Haa, waxaa jiray arin loo baahnaa in la baddalo, waxaana u maleynayaa in go’aanka uu ahaa mid sax ah”.
“Way iska cadahay in kooxda ay siisay fursad Ole Gunnar Solskjær ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedka, sababtoo ah waxay raadinayaan macalin aad u wanaagsan, iyagoo doonaya markan inay iska hubiyaan xulashadooda ku haboon inuu leyliyo kooxda”.
“Waxaan xiriir la leeyahay shaqsiyaad badan ee kooxda ka tirsan, waan kala hadli doonaa wax badan, waxaan sidoo kale la hadlay isbuucan, si ay kooxda u guuleysato”.
“Waxaad u baahan tahay wax walba ee wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad noqoto tababare aad u wanaagsan ee u dhow ciyaartoyda, waxaan u maleenayaa inuusan fiicneyn xiriirka waaxda farsamada iyo ciyaartoyda”.